Ny fiadian'Andriamanitra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2015-03 mpandimby ny Magazine > Ny fiadian'Andriamanitra
Tsy azoko antoka hoe inona no hevitrao, fa tsy te-hiatrika liona masiaka tsy voaro aho! Io vatana matanjaka be io, izay mivolom-bolo ary manana ratra lehibe azo averina izay mety manitsaka na dia ny hoditra henjana sy bitika aza tsy tianao ho akaiky loatra - ity liona rehetra ity dia lasa tonga mpiremby mampidi-doza indrindra any Afrika sy ny hafa Mba hankanesan'ny faritra amin'ny tany.
Na izany aza, manana fahavalo isika izay mpihaza masiaka. Tsy maintsy miatrika izany isan’andro mihitsy aza isika. Ny Baiboly dia milazalaza ny devoly ho toy ny liona mandeha amin'ny tany mitady remby mora (1. Petrus 5,8). Fetsy sy matanjaka izy amin'ny fitadiavana ireo niharam-boina malemy sy tsy manan-kery. Sahala amin’ny liona, matetika no tsy fantatsika hoe rahoviana sy aiza izy no hamely manaraka.
Tsaroako fa namaky tantara an-tsary aho fony aho mbola kely, izay nanasongadina ny devoly ho toy ny sariitatra mahafatifaty miaraka amin'ny tsiky manjavozavo, ny rambony mipoitra amin'ny diaper, ary ny trident. Ho tian’ny devoly ny ho hita amin’izany, satria lavitry ny zava-misy.Mampitandrina antsika ny apostoly Paoly ao amin’ny Efesianina. 6,12 manohitra ny hoe tsy miady amin’ny nofo aman-drà isika, fa amin’ny herin’ny maizina sy ny tompo izay miaina amin’izao tontolo maizina izao.
Ny vaovao tsara dia tsy marefo isika amin'ireo fahefana ireo. Ao amin'ny andininy faha-11 dia afaka mamaky momba ny zava-misy isika fa fitaovana fiarovan-tena izay manarona antsika hatrany an-tampon-tongotra ka hatrany amin'ny toerany ary ahafahantsika miomana amin'ny maizina.
Ny akanjo fiarovan'Andriamanitra dia namboarina
Misy antony tsara antsoina hoe "fiadian'Andriamanitra". Tsy tokony hieritreritra mihitsy isika hoe mahavita mandresy ny devoly amin'ny herintsika manokana!
Ao amin’ny andininy faha-10 isika dia mamaky fa tokony hatanjaka ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny heriny isika. Jesosy Kristy dia efa nandresy ny devoly ho antsika. Nalaim-panahy taminy izany, nefa tsy nilefitra taminy mihitsy. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy koa no ahafahantsika manohitra ny devoly sy ny fakam-panahiny; ao amin’ny Baiboly isika dia mamaky fa mitovy amin’ny endrik’Andriamanitra isika (1. Mosesy 1,26). Izy tenany no tonga nofo ka nonina tamintsika (Jao 1,14). Nandidy antsika Izy mba hitafy ny fiadiany mba handresena ny devoly noho ny fanampian’Andriamanitra (Hebreo 2,14): “Satria ny zaza dia nofo aman-drà, dia nandray izany koa Izy, mba handraisana ny fahefana amin’izay manana fahefana amin’ny fahafatesana, dia ny devoly, amin’ny alalan’ny fahafatesany. dia tsy maintsy mitafy ny fiadian’Andriamanitra tonga lafatra mba hahafahantsika miaro tanteraka ny fahalementsika olombelona.
Sady feno ilay fiadiana
Ny fiadian'Andriamanitra dia miaro antsika amin'ny alalany!
Ny singa tsirairay voalaza ao amin'ny Efesiana 6 dia misy dikany roa. Amin'ny lafiny iray, izy ireo no zavatra tokony hiezahantsika ary amin'ny lafiny iray, izy ireo ihany koa dia ny zavatra izay mahatanteraka amin'ny fahafenoany amin'ny alàlan'i Kristy sy amin'ny fanasitranana izay entiny.
“Indro efa tafaorina tsara izao, misikina fahamarinana ny valahanareo” (Efesiana 6,14)
Mahay milaza ny marina isika Kristianina. Na dia zava-dehibe aza ny milaza ny marina, dia tsy ampy mihitsy ny fanaovana ny marina. Kristy mihitsy no nilaza fa Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Rehefa asiana fehikibo manodidina ny tenantsika isika dia manodidina azy io. Tsy voatery hanao izany irery anefa isika, satria manana ny fanomezan’ny Fanahy Masina izay manambara amintsika izao fahamarinana izao: “Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra Izy” (Jaona 1. Kor6,13).
“Nitafy ny fiadian’ny fahamarinana” (Efesiana 6,14)
Nieritreritra foana aho fa ilaina ny manao asa soa sy manao ny marina mba hiarovana ny tena amin’ny devoly sy ny fakam-panahiny. Na dia antenaina hikatsaka fari-pitondran-tena ambony kokoa aza isika amin’ny maha-Kristianina antsika, dia lazain’Andriamanitra fa ny fahamarinantsika, na dia amin’ny androntsika tsara indrindra aza, dia akanjo voaloto (Isaia 6.4,5). Amin’ny Romana 4,5 dia manazava fa ny finoantsika fa tsy ny asantsika no mahatonga antsika ho marina, ary rehefa tojo ny fahamarinan’i Kristy ny devoly dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mandositra. Avy eo izy dia tsy manana fahafahana handoto ny fontsika intsony satria arovan’ny fiadian’ny fahamarinana. Rehefa nanontaniana i Martin Luther indray mandeha ny fomba nandreseny ny devoly, dia hoy izy: “Eny, rehefa mandondona ny varavaran’ny tranoko izy ka manontany hoe iza no mipetraka ao, dia nankao am-baravarana i Jesosy Tompo ary niteny hoe: “ Efa niaina teto i Martin Luther indray mandeha. , fa nifindra. Mipetraka eto aho izao. Rehefa mameno ny fontsika i Kristy ary miaro antsika ny fiadian’ny fahamarinana, dia tsy afaka miditra ny devoly.
“Miorina amin’ny kiraro, vonona hijoro ho amin’ny filazantsaran’ny fiadanana” (Efesiana 6,15)
Miaro ny tongotrao ny kiraro sy ny kiraro rehefa mandeha mamaky ny loto avy amin'ity tontolo ity isika. Tokony hiezaka isika hijanona ho tsy be mpitia. Afaka manao izany amin'ny alàlan'i Kristy ihany isika. Ny filazantsara no vaovao tsara sy hafatra nentin'i Kristy ho antsika; vaovao mahafaly, noho ny Sorompanavotany dia arovana sy voavonjy isika. Izy io dia ahafahantsika manana fandriampahalemana izay tsy takatry ny sain'olombelona. Manana fandriam-pahalemana isika amin'ny fahafantarana fa resy ny fahavalontsika ary arovantsika aminy.
“Ary ambonin’izany rehetra izany, tano ny finoana ho ampinga.” (Efesiana 6,15)
Ny ampinga dia fitaovam-piadiana miaro antsika amin'ny fanafihana. Tsy tokony hino ny herintsika manokana mihitsy isika. Izany dia ho toy ny famantarana vita amin'ny aluminium foil. Tsia, tokony hiorina amin'i Kristy ny finoantsika satria efa nandresy ny devoly izy! Galatianina 2,16 dia milaza mazava indray fa tsy afaka manome fiarovana ho antsika ny asantsika: “Fa satria fantatsika fa tsy ny asan’ny lalàna no anamarinana ny olona, ​​fa ny finoana an’i Jesosy Kristy, dia mino an’i Kristy Jesosy koa isika, azo hamarinina amin’ny finoana an’i Kristy fa tsy amin’ny asan’ny lalàna; fa tsy misy olona marina amin’ny asan’ny lalàna”. Ao amin’i Kristy irery ihany ny finoantsika ary izany finoana izany no ampingantsika.
“Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha” (Efes 6,17)
Ny fiarovan-doha iray dia miaro ny lohanay sy ny eritreritsika. Tsy maintsy ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao sy hiarovantsika tena amin'ny eritreritra sy nofinofy mahafinaritra. Tokony ho tsara sy madio ny fisainantsika. Fa ny asa dia mora fehezina lavitra noho ny eritreritra, ary ny devoly no mahay mandray ny fahamarinana ary mamadika azy. Faly izy rehefa misalasala ny famonjena antsika isika ary mino fa tsy mendrika azy izany na mila manao zavatra isika. Saingy tsy mila misalasala isika satria ny famonjena antsika dia ao amin'i Kristy.
“Ny sabatry ny Fanahy, dia ny tenin’Andriamanitra” (Efes 6,17
Ny tenin’Andriamanitra dia ny Baiboly, fa i Kristy koa dia lazaina ho tenin’Andriamanitra (Jao 1,1). Samy manampy antsika hiaro tena amin’ny devoly. Tadidinao ve ilay andalan-teny ao amin’ny Baiboly izay milaza ny fomba nakan’ny devoly fanahy an’i Kristy tany an’efitra? Isaky ny manonona ny tenin’Andriamanitra izy dia niala avy hatrany ny devoly (Mat 4,2-10). Ny tenin’Andriamanitra dia sabatra roa lela izay apetrany eo am-pelatanantsika mba hahafahantsika mahafantatra ny fomba famitahan’ny devoly sy miaro tena amin’izany.
Raha tsy misy an’i Kristy sy ny fitarihan’ny Fanahy Masina, dia tsy ho afaka hahazo ny Baiboly manontolo isika4,45). Ny fanomezan’ny Fanahy Masina dia mahatonga antsika hahatakatra ny tenin’Andriamanitra, izay manondro mandrakariva an’i Kristy. Manana fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra handresena ny devoly isika: Jesosy Kristy. Koa aza manahy loatra rehefa mandre ny devoly mirohondrohona. Mety ho toa mahery izy io, saingy voaaro tsara isika. Efa nomen’ny Tompo sy Mpamonjy antsika ny fiadiana mba hiarovana antsika amin’izany: ny fahamarinany, ny fahamarinany, ny filazantsaran’ny fiadanana, ny finoany, ny famonjeny, ny fanahiny ary ny teniny.